Tonga any Hearthstone ny fiparitahan'ny fifaninanana lehibe amin'ny volana aogositra | Androidsis
Ny fanitarana an'i Hearthstone 'The Grand Tournament' manaraka dia tonga tamin'ny Aogositra
tsara ho an'ny Aogositra ho avy izao dia hanana fanitarana vaovao ho an'ny iray amin'ireo lalao video tsara indrindra izahay ho an'ireo fitaovana finday misy ankehitriny ary tsy iza fa ny Blizzard's Hearthstone. Ity lalao karatra miorina amin'ny tontolon'ny Warcraft ity dia manao ny asany eo amin'ny Gamers amin'ny Android miaraka amina famaranana lehibe, kalitao teknika lehibe ary ny asa tsara rehetra an'ny iray amin'ireo orinasa tsara indrindra amin'ity lalao video ity.
Ka i Hearthstone avy ao amin'ny Blizzard Entertainment dia vonona ao an-dakozanao miaraka amin'ny iray amin'ireo fanavaozana hafa izay hitondra antsika karatra sy vaovao bebe kokoa miaraka amin'ny «The Great Tournament». Fanitarana nambara tamin'ny hetsika iray tany San Francisco ary izany dia hitondra antsika fahafinaretana sy fialamboly bebe kokoa amin'ity fahavaratra ity izay ananantsika fotoana mahafinaritra handiniana ny tenantsika amin'ny lalao mikorontana manohitra mpilalao hafa. Ny lalao karatra tsara indrindra amin'ny Android dia miomana hitondra antsika amin'ny iray amin'ireo fanitarana izay manamarika a mialoha sy aorian'ny resaka votoaty vaovao ho an'ity lalao video mahafinaritra ity.
1 Ilay fifaninanana lehibe
2 Miteraka tombony betsaka kokoa amin'ny finday noho ny amin'ny solosaina
Ilay fifaninanana lehibe
Toy ny amin'ny Game of Thrones, amin'ny boky sy ny fahitalavitra voalohany, Ho eo alohan'ny fampirantiana isika izay misy tompokolahy isan-karazany sy fiakarana avy amin'ny toerana lavitra indrindra amin'ny Grand Tournament hifaninana amin'ny laza sy ny laza. Fifaninanana noforonin'ny Crusade Arzantina taona maro lasa izay hanangonana tompon-daka mendrika izay hiatrika ireo olona ratsy fanahy indrindra ao Azeroth.
Amin'ity fanitarana vaovao ity Ampitomboy ny tranomboky Hearthstone amin'ny karatra vaovao 123 manasongadina karazana ody vaovao, fitaovam-piadiana ary repertoire tsara an'ny Knights vonona hanome anao ny fahaizany tsara indrindra amin'ny ady sy ompa.
Avy amin'i Blizzard mihitsy no nanamarihana azy hoe Ny teny lakile vaovao nataon'i Minion dia 'Inspire' ary navadika rehefa avy nampiasa ny herin'ilay maherifo. Raha misy antony ampiasana ny herin'ilay maherifo rehefa misy minion manentana fanahy eny amin'ny solaitrabe dia hisy andiana fiatraikany isan-karazany hitranga.
Ho an'ny fotoana nisy sari-tany vaovao noforonina izay hotokanana rehefa tonga ity fanitarana ity, izay ho tonga amin'ny volana Aogositra ho an'ny Windows, Mac, iOS ary Android. Tsy maintsy matoky ianao fa rehefa misy ny The Great Tournament, ny mpilalao dia afaka mahazo valopy karatra avy amin'ny The Great Tournament, Globins vs Gnomes na kilasika.
Miteraka tombony betsaka kokoa amin'ny finday noho ny amin'ny solosaina
Ny vaovao momba ny fanitarana an'i Hearthstone dia miaraka amin'ny iray hafa, avy amin'ny fandinihana manokana izay manao ny fandrefesana azy manokana, izay anehoana ny maha-ity lalao ity manana tombony bebe kokoa amin'ny fitaovana finday noho ny amin'ny solosaina. Ny fiovan'ny fironana amin'ny mety ho an'i Blizzard ary azo antoka fa hitondra vaovao bebe kokoa toy ny lohateny vaovao izay manolo-tena hanararaotra ireo hatsaran-toetran'ity karazana sehatra ity.
Ary azo antoka, izany dia vokatry ny fahaizan'ny fahaizan'ny tena midika hoe mivoaka amin'ny paosin'ny pataloha na kitapo amin'ny findainao finday avo lenta, mba hanana lalao tsara amin'ny lalao karatra toa an'i Hearthstone. Lalao video izay miasa tanteraka, tsy misy bibikely, miaraka amina fahatsiarovan-tena ara-teknika lehibe, sary mahafinaritra ary atiny lehibe havaozina matetika izany matetika. Iray amin'ireo ohatra arahinao raha te hampiasa vola ianao izao ary hamokatra ny lalao video ho an'ny Android.
Developer: Ny sandan'ny anjara Blizzard Entertainment, Inc.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny fanitarana an'i Hearthstone 'The Grand Tournament' manaraka dia tonga tamin'ny Aogositra
Fampiharana Android ankafizin'i Cristina Torres
Sony Concept for Android: Android madio misy rindranasa sy fampiasa Sony zanatany